Rooble oo shaaciyey xilliga uu furmayo shirka Golaha Wada-tashiga Qaranka - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeWararka MaantaRooble oo shaaciyey xilliga uu furmayo shirka Golaha Wada-tashiga Qaranka
December 21, 2021 News Wararka Maanta 4
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa casuumaad rasmi ah u direy madaxda Golaha Wada-tashiga Qaranka, si ay uga soo qeyb galaan shir 27-ka bishaan December ka dhici doona magaalada Muqdisho.
Golaha wadatashiga Qaran oo ka kooban Ra’iisul Wasaaraha, Madaxda dowlad Goboleed iyo Guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxaa xilligan looga fadhiya inay dib u soo celiyaan kalsoonidii luntay ee doorashada
@ Caaqil sare Dr Awlal
Garaad fog iyo dareen wanaagsan ayaad leedahay waana aan kaaga mahad celinayaa qoraalka aad halka hore iisoo dhigtay.
Soomaali waxaa rogay qof aan aqoon doqonimadiisa oo isu haysta wax kale, oo hadana hal dheg keliya iyo hal il kaliya waxna ku maqla waxna ku arka, dameeri dhaan raacdayna iska ah.
Hadii xitaa aabaahaa uu khaldan yahay waa inaad garan karto hadaad wax yarba ha ahaadeene aqoon leedahay, balse waxaa ina hoday wax lagu tilmaamo ‘Aqonn yahan’, cidina ma weydiiso bal noosheeg aqoontaada, ama imtixaan kaga qaada wuxuu sheeganayo, waxaadse la yaabaysaa markaa dhegaysato iyagoo wax sheegaya ayaad isleedahay war kani wuxuu hogaamiyo iska daaye haduu laamiga sida loo gooyo garto wax kale yaan laga filin, balse durbaanka loo tumayo ayaa sii waala, doqontuna taasay aamintaa.
Anigu waxaan isleeyahay waxa hogaaminta la yiraahdo oo inaga xumaatahay halaga dhigo imtixaan ama xaraash, waxaana aan doonayaa in dhalinta wax barataaa ka dooddo. Imtixaan in laga qaado qofka jago sare usoo tartama, imtixaankaasoo ku salaysan muxuu maadiga sayniska ka yaqaan – dhululubo dhumucdeed iyo baaxadeeda ma xisaabi karaa iwm, muxuu cilmiga diinta ka yahay- intee juz ayuu quraanka ka xafidsan yahay, jirkiisu ma fiyoow yahay – Afgooye maka soo roori karaa, madaxiisu ma fiyoow yahay -psychological test, danbi maka galay meesha uu joogay 15-kii sano ee ugu danbeeyey, caruurtiisa iyo waalidkii wax ma taray. ama xaraasha halaga dhigo si ay uga cararaan kuwa maalin walba usoo taagan in ay kursi qabtaan, oo wax kale oo shaqo aan aqoon dalkiina ku lumay, in la yiraahdo wareega koowaad ninka kusoo bixi waayaya 50-kun oo doolar haka lunto, wareega labaad ninkiii kusoo biyi waayana san-ka halaga jaro, wareega ugu danbeeya ninkii lagaga guuleystana labada lugood halaga jabsho dibdanbena isuma soo sharixi karo. Waliba taasna loogu sii daro hadaad mar doorasho sare ku harto 10 sanadood isma soo saharixi karkid.
Arintaasi waxbay furdaamin lahayd, laakiin maanta dadkuna waxba isma weydiinayaan waxaana horgaleyaal dadka u ah danaysatayaal aan dadka u sheegin caruurtoodu meeshay u jooogto iyo meesha ahntida ay ka keeneen haday marka xafiiska yimaadeen kahor aanay hanti badan lahayn.
Awalaloow dhurwaa muxuu sheegi, waa ‘maxay kanuugtaa maxayse ku nuugtaa, dukun-daakun, Allow balaayada na hareer mari
Ninyohow maad isharaxdid ? waa ;laguu bgaahan yahay. wadankan waalaga waayay dad mufakirrin ahe. Sidaa aad sheegtay dalkan waa la dayacay, waxaana loo daayay dad waxma garato ah oo aan dadka iyo ndalka u turay iiimaankan la’.
@@@Caaqil Sare Sag-Saag,
Walaal, aad ayaan kaaga mahadinayaa maqaamkaas sare ee aad i gaarsiisay iyo sida aad ii sharaftay. Adigana Ilaahay sidaas si kasii fiican hakuu sharfo adduun iyo aakhiraba. Waanan kaa raalligelinayaa in aan jawaabta kaa lasoo daahay.
Sida uu markhaatiga kaaga kacay walaalkeen Laand-ruugar ina laand-roobal, nin culus ayaad tahay oo ay bulshadeennu baahi xun uqabto aqoontiisa, xikmaddiisa, iyo waaya’aragnimadiisa qaaliga ah.
Awlal and Sag-Saag (Saaqid):
Waxan la yiri: Bahal Hiiglo Bahjeli isulama Joogto Af Qadhmuunina kuma kala tagto kkkk Bal Labadan Horogle ee Haybta wadaaga Afsomaligoda hoosiyo hikaaddooda dhagaysta kkkk kkk kkkk kkkkk Alloow yaan u Hambayne , Intuu haamo ku qaato, u hoggaansho sida Awr kkkk kkkkk ku waraabdho hargaysa.kkkkk kkkkk kkk kkkk kkk